Ɔbarima a n’asɛm yɛ mmɔbɔ yi, na ɔnenam hɔ a ɔnhyɛ hwee. Daa adesaeɛ ne adekyeeɛ, na “ɔteateam wɔ ada ne mmepɔ no mu de aboɔ twitwa ne ho.” (Marko 5:5) Ná ne ho yɛ hu araa ma obiara mpo suro sɛ ɔbɛtwam baabi a ɔwɔ no. Nkurɔfo yɛɛ sɛ wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn bɛgu ne nan ne ne nsa a, nanso ɛyɛ a na watete mu. Obiara antumi no.
Obiara a ɔhuu ɔbarima no ne obiara ɔtee ne ho asɛm no bɔɔ hu, efisɛ na wɔnnim nea ɛdi akyi reba. Enti wɔsrɛɛ Yesu sɛ ɔmfiri kurom hɔ. Ɔrekɔ no, ɔbarima no kaa sɛ ɔne no bɛkɔ. Nanso Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ wo fie, w’abusuafoɔ nkyɛn, na kɔka deɛ Yehowa ayɛ ama woɔ nyinaa ne mmɔborɔhunu a wayi no adie akyerɛ woɔ no kyerɛ wɔn.”—Marko 5:19.